Malunga nathi - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
UDamei Kingmech Pump Co., Ltd.ngumvelisi wempompo waseTshayina weempompo zeshishini. Ukubambelela kumgaqo wokubonelela abathengi ngezixhobo ezisemgangathweni xa zifuneka, inkampani yethu iphuhlise iintlobo ezityebileyo zezixhobo zokumpompa kunye nezahlulo, ezinje ngeempompo zeludaka, iimpompo ze-API 610, iimpompo zeekhemikhali, iimpompo zogutyulo, iimpompo zokuqhuba ngemagnethi kunye neempompo zamanzi acocekileyo. Zonke ezi mveliso zisetyenziswe ngokubanzi kwimigodi, isinyithi, imigodi yamalahle kunye nemveliso ye-petrochemical, ukuveliswa kwamandla, ukuhanjiswa kwamanzi kunye nogutyulo lwelindle kunye nonyango, njl. Okwangoku, iivaluva zempompo esemgangathweni kunye nezinto ezinxulumene noko ziyafumaneka kubasebenzisi.
Umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-2007 kwaye waseka isikali "se-3.13.30.300", okt, iziseko zemveliso ezi-3, amava eminyaka eli-13 atyebileyo, iinjineli ezingama-30 zengcali, abaxhasi abangama-300 abathembekileyo. Ixhaswe liqela leengcali elinobuchule obukhethekileyo kuyilo lwempompo, prototyping kunye nokuvavanywa, i-DAMEI ikhule ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo kwaye iphuhlise izixhobo zokumpompa ezisemgangathweni ngokwanelisa iimfuno eziguqukayo zentengiso. Njengoko iimveliso zethu zitsala ingqalelo eyandayo evela kubathengi behlabathi, siqala ukuseka iqela lobuchule labathengisi. Zibalasele kuvavanyo lwesiza kunye nokusombulula ingxaki, zikunceda ekuvavanyweni kwezixhobo, ukulungelelaniswa kweempompo kunye nee-motors, ukugunyazisa iinkqubo zokumpompa.
I-ofisi eyintloko yenkampani yethu ibekwe kwisixeko saseShijiazhuang, esigubungela indawo yomgangatho we-750m2. Ngoku, ngaphezulu kwe-20 yabasebenzi abaziingcali basebenza apho. Ezi zityalo zintathu sizimisileyo ngokulandelelana zibekwe eShijiazhuang (impompo oluludaka), iDalian (impompo yemichiza), iShenyang (API 610 Petro-pump), nganye yazo ivelisa iimpompo ngokungqinelana ngokungqongqo nomgangatho we-ISO9001, QA / QC, CE , Uphawu lwe-IQNet kunye neminye imigangatho yangaphakathi yoshishino. Zonke ezi zityalo zintathu zixhotyiswe ngoomasifundisane banamhlanje apho kukho izixhobo eziphambili zokwenza, ukudibanisa, ukuvavanya kunye nokugcina. Ulwazi oluneenkcukacha malunga nabo luluhlu olungezantsi:
1.Shijiazhuang mveliso: indawo yomgangatho ngokubanzi: 8000m2oomasifundisane: 2200m2, Abasebenzi: 30;
Umzi mveliso we-2.Dalian: umgangatho wendawo jikelele: 20000m2, iindibano zocweyo: 10000m2, Abasebenzi: 120;
Umzi-mveliso we-3.Shenyang: umasifundisane: 1600m2, Abasebenzi: 30.
4. Zizonke: iindibano zocweyo: 13800m2Abasebenzi: 180.
Oko yasekwa, inkampani yethu ibambelela kumgaqo wokubonelela ngeentlobo zeempompo eziphambili. Ngokusekwe kumava eminyaka yethu kwi-R & D kunye nokwenziwa kweempompo, siye saqulunqa iintlobo ezininzi zeempompo kunye nezahlulo, ezinje ngeempompo ezenziwe ngezinto ze-hi-chrome kunye ne-A09, iTi kunye neTi ingxube yeempompo kunye nezivalo, iimpompo ze-froth ethe tye, i-BB2 enkulu iimpompo ezinezikhululo zokuthambisa (ezixhotyiswe ngeebheringi zeKingbury) kunye neekhabhon zecarbon iibheringi zeempompo zeVS4. Njengoko iqela lethu le-R & D lenze impumelelo kwiingxaki ezininzi zobuchwephesha, ngoku sinokubonelela kwiimpompo zentengiso ezonwabela amandla amakhulu e-1000kW kunye nentloko ephezulu ye-1000m kwaye zisebenze kakuhle kubushushu obuphezulu be-400 ° C. Iimpompo ezingakumbi zokubalulwa ngakumbi ziya kuphuhliswa kwixa elizayo, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi eziya zisanda kakhulu zokupompa izixhobo.
Ngombulelo kumgangatho wazo olungileyo, iintlobo ezityebileyo kunye nokusebenza okuthembekileyo kakhulu, iimveliso zethu zithunyelwe ngaphandle kwiimarike zangaphandle, ezinje ngeCanada, iUS, UK, France, France, Australia, Czech, Poland, South-Africa, Argentina, Indonesia, Philippines , Kazakhstan, eUAE, ePakistan, njalo njalo. Ngaxeshanye, siye saseka ubudlelwane bokusebenzisana neenkampani ezininzi zamanye amazwe ezinjengeAnglo American plc., IBarrick Gold Corporation, iBHP Billiton Ltd, iPhilex Mining Corporation, newmont africa mining Plc., KAZ Minerals, Iqela le-Kazzinc kunye ne-India Aluminium kunye ne-Fatima Fertilizer Company Limited njalo njalo.
Kule minyaka ilithoba idlulileyo siye sabona iinzame zethu ezinkulu kwi-R & D nasekwenzeni iimpompo kunye nezahlulo. Nangona kunjalo, ngaphandle kweetrasti zakho kunye neenkxaso ezomeleleyo, ngekhe sifumane oko sinako okanye singabi ngabangabo. Ke ngoko, kwikamva elizayo, ngokuqinisekileyo siya kusebenzisa iinzame ezingakumbi kuphuhliso nakwimveliso yeemveliso ezisemgangathweni ngakumbi kwaye sinike iinkonzo ezinolwazelelelo nezijolise kubathengi kuwe, ukuya phambili kwindlela yethu eya empumelelweni enkulu.